Tahirimbolam-panjakana: misy fandaminana ireo zokiolona haka fisotroan-dronono | NewsMada
Tahirimbolam-panjakana: misy fandaminana ireo zokiolona haka fisotroan-dronono
Nanomboka omaly ny fizarana fisotroan-dronono ho an’ireo zokiolona. Misy hatrany ny fandaminana izay napetraky ny Tahirimbolam-panjakana mba tsy hisian’ny fitangoronana loatra amin’ireo toerana hakana izany.
Voakasiky ny fandaminana manokana ireo rehetra mpandray fisotroan-dronono amin’ny PGA sy RGA Antaninarenina, Tminfop 67ha, TMA Tsimbazaza, Perception principales (PP) rehetra eto Antananarivo Renivohitra, Plan Anosy, PP Ambohidratrimo sy ireo Trésoreries Générales ao Toamasina sy Fianarantsoa.
Notsinjaraina arakaraky ny laharana ny fandraisana ireo zokiolona haka fisotroan-dronono amin’ireo toerana ireo. Nanomboka omaly alatsinainy 18 mey, anjaran’ireo manana laharana karatra miafara amin’ny 0, 1, 2, 3, 4 no mandray izany. Anio talata, ireo manana karatra miafara amin’ny laharana 5, 6, 7, 8 kosa no maka ny anjarany. Rahampitso alarobia, ireo manana karatra miafara amin’ny 9, A, B ary C no milahatra maka ny vola fisotroan-drononony.
Ireo tsy voalaza ao anatin’ireo laharana ireo kosa dia maka ny azy toy ny mahazatra hatrany. Ireo rehetra nandray ny fisotroan-drononony tao amin’ny PGA Isoraka, ny volana avrily teo kosa dia miverina mandray izany ao amin’ny RGA Antaninarenina, amin’ity volana mey ity.
Ho an’ireo ao amin’ny PP Atsimondrano kosa dia ao amin’ny Plan Anosy, nanomboka omaly hatramin’ny 22 mey izao. Ny alatsinainy 25 mey vao hiverina ao Tsaralalàna izany.
Nanamarika ny tompon’andraikitra fa tsy voatery maka taratasy fahazoan-dalana manokana ireo zokiolona haka fisotroan-dronono. Efa nahazo toromarika ireo manao fanaraha-maso ny lalana sy ny fivezivezena mahakasika izany.